Indlu esemaphandleni esemaphandleni enengxangxasi neentaba - I-Airbnb
Indlu esemaphandleni esemaphandleni enengxangxasi neentaba
Igumbi lakho lokulala e ifama sinombuki zindwendwe onguDeep And Priya
IFama yeHlathi i-Enchanted yindawo yokuhlala yehlathi yeehektare ezili-18, ekwiParbing (Ranka), ilali ebukekayo kufutshane neGangtok, eSikkim. Yindawo ezolileyo yokuphumla kwabo bahambi kunye nabazulazulayo. Yifama eqhuba ngokupheleleyo enendawo yokuhlala iindwendwe. Iindwendwe zamkelwa kwifama ngokucula kweentaka kunye nesandi se-waterfall enchanting ekufutshane kwaye ngokuqinisekileyo - umoya omtsha wentaba ovuselelayo. Indawo efanelekileyo yokuphumla kude nesihlwele esixakekileyo kunye nokuphithizela.
I-cottage yethu yenziwe ngendlela yokubonelela iindwendwe zethu ngeyona nto ibhetele kunye nokuphumla. Indawo yokuhlala isasazwe ukuze iindwendwe zibe nendawo yabucala kwaye zizulazule ngokukhululekileyo kwaye zibe zodwa. I-cottage yindlu yokunethezeka ehlala kabini enebhafu encanyathiselwe kunye neveranda kwaye inazo zonke izinto ezisisiseko. Sisebenzise iindlela zokwakha zesiNtu ekwenzeni le cottage. Igumbi lokuhlambela linamanzi ashushu nabandayo. Akukho ziseti zeTV efama njengoko sifuna ukunika iindwendwe zethu ukuziva kwifama yokwenyani ukuze zinxibelelane noMama weNdalo ngexesha lokuhlala kwazo. Nangona kunjalo, sibonelela nge-Wi-Fi yasimahla ukuze iindwendwe zihlale zinxibelelene nosapho kunye nabahlobo. Siye sahambisa iincwadi zokuhamba neemagazini ezinoSikkim ukuze bafumane ulwazi olungakumbi ngale meko intle kangaka. Igumbi libonelela ngeembono zepanoramic zehlathi eliluhlaza. Phantse i-70% yezinto ezisetyenziswa kwi-cottage zithengwe ekuhlaleni kwifama. KwiFama yeHlathi yase-Enchanted, siphatha undwendwe ngalunye njengelungu lethu losapho kwaye sijonge kwiimfuno zabo ezithile.
Lilonke, kwiFama yeHlathi yase-Enchanted, ivumba elikhuthazayo lomoya omtsha wentaba kunye nemibono emnandi kunye nokusingqongileyo okuzolileyo kunika utshintsho olwamkelekileyo ukusuka kwisantya esinesiphithiphithi sezixeko.
Izinto ezenziwa efama:
Ekubeni ifama isasazeke kwiihektare ezili-18, umntu unokwenza izinto ezahlukeneyo. Lo mmandla unamahlathi ungako unokuwonwabela. Iimpungutye, amaxhama akhonkothayo, oonomatse ababhabhayo, nemarten zenze ifama yethu yasehlathini yaba yindawo yemvelo yokuhlala. Kukho ithuba lokuzibona ngamanye amaxesha.
UkuLima ngeZinto eziphilayo:
Iindwendwe zinokubandakanyeka ekulimeni kwaye zifunde iinkqubo ezibandakanyekayo ekukhuleni kokutya ngokwemvelo. Akukho nto ifana nokuvuna imifuno kunye neziqhamo ezikhule ngokwendalo.
Uhambo lwasezilalini kunye nohambo lwendalo: (Iintlawulo zesikhokhelo ziyasebenza)
Ungahamba intaba ukuya kumlambo okufutshane nepropathi. Umjelo wondliwa ziingxangxasi ezintle eziya kukushiya umangalisiwe. Unokuthatha idiphu kumachibi endalo enchanting kwaye uphumle. Kukho iindawo ezininzi zokuhamba ezijikeleze ifama. Unokuhamba uhambo lwedolophana kwaye wazi inkcubeko yasekuhlaleni. Ngokwenza oko, ufumana amava otyani obutyebileyo kunye nokwahlukeneyo kweSikkim kolu hambo.
Ipikiniki ngakumsinga kunye neengxangxasi: (Iintlawulo ziyasebenza nakwisicelo sangaphambili)
Sinethamsanqa ukuba sibe nomsinga ohamba kanye ekupheleni kwepropathi esondliwe yingxangxasi entle. Kulapha apho silungiselela ipikniki yeendwendwe apho isidlo sasemini senziwe emlilweni weenkuni kwaye sikhonza ecaleni komlambo.
Ukubukela iintaka:(Iintlawulo zesikhokhelo ziyasebenza)
Ifama yethu yindawo yokubukela iintaka. Ifama isikelelekile ngenani elihle leentaka ezinjengeMagpie, i-Red-vented Bulbul, i-Himalayan Buzzard, i-flycatcher, njl. Ukhenketho lokubukela iintaka lungalungiselelwa xa ulucelile.
I-BBQ kunye nomlilo omkhulu: (Iintlawulo ezongezelelweyo)
Singakwazi kwakhona ukulungiselela i-BBQ kunye nebhonfire. Hlala kufuphi nomlilo ovuthayo, cula, utye kwaye wonwabe kwaye njengoko ujonge phezulu, ubona iinkwenkwezi zikujongile kakuhle. Ungazalisekisa iphupha lakho eliqaqambileyo ngemibono ephefumlayo yesibhakabhaka sasebusuku ngomlilo ovuthayo, umzekelo, ebusika.
Ukuba i-adventure yinto yakho, indawo ye-paragliding kukuphosa nje ilitye kude. Okanye unokuthatha nje incwadi kwaye uphumle kwi-hammock ubukele amafu eqengqeleka phezu kwakho.
*Ukuthathwa/ukuwisa kwisikhululo seenqwelomoya kunye nakuphi na ukujonga indawo kunokubonelelwa ngexabiso elongezelelweyo. Nceda usazise kwangethuba malunga nezicwangciso zakho zokuhamba xa ufuna inkonzo yezothutho. Ukufumana isithuthi ngexesha lexesha eliphakamileyo kunokuba ngumsebenzi omkhulu.
Imozulu ikholisa ukuba mnandi - kushushu kwaye kunelanga amaxesha amaninzi. Kunokwenzeka ukuba kubekho iimvula zokuvula nokuvala unyaka wonke, ngaphandle kobusika. Iimonsoons, nangona kunjalo, ziqala ukusuka ekupheleni kukaJuni kwaye zihlala kude kube ngoSeptemba. Ngokuqhelekileyo kuya kuba manzi ngeli xesha. Ukuba uceba ukutyelela ngala maxesha, qiniseka ukuba uphethe impahla engenamanzi. Iiambrela zinokubonelelwa ngexesha lokuhlala kwakho. Ubusika buya kubanda(Disemba-Februwari). Nceda uphathe iimpahla ezifudumeleyo ukuba uceba uhambo ngala maxesha. Sibonelela ngeebhegi zamanzi ashushu kunye nesixhobo sokuvuthela umoya ukuze uzigcine ulungile kwaye ushushu ebusuku.
Kuya kunceda ukuba unokunxiba izihlangu ezikhululekileyo njengoko iindlela ezingaphakathi kunye nezijikeleze ifama zinokuba rhabaxa kwaye ngamanye amaxesha zibe mtyibilizi.
Ifama yi-30-40 min drive ukusuka eGangtok. Xa ukufutshane nefama, uya kubona amasimi amaninzi erayisi, iindlwana ezincinci, amahlathi ashinyeneyo aluhlaza kunye nombono weGangtok. Ilali ayinabemi kwaye ineevenkile ezimbalwa. Abantu balapha banobubele kakhulu yaye bazimisele ukunceda. Zininzi iindawo zokukhwela intaba kunye nokuhamba nto leyo eyenza ukuba le ndawo ikufanele ukutyelelwa.
Indawo yeParagliding ikumganyana nje wokugibisela kude nefama. IRanka Monastery yodumo yaseSikkim ikumgama nje oziikhilomitha ezi-4.
Ukusuka efama, umntu unokubona umbono we-panoramic yedolophu yaseGangtok kwaye ngokuhlwa, umbono uya uba ngcono nedolophu yonke ikhanya.
Umbuki zindwendwe ngu- Deep And Priya
Umbono wale fama kukubonelela iindwendwe nge-ambience ezolileyo nezolileyo. Ixesha lokuhlangana kwakhona nendalo kamama. Esi sisizathu kanye esibangela ukuba sibuxabise ubumfihlo bakho kunye nendawo. Kwangaxeshanye, siyathanda ukunxibelelana neendwendwe zethu ngamaxesha athile, ukuze siqinisekise ukuba zinexesha elisemgangathweni. Ukuba kukho naziphi na iimfuneko, siya kukuvuyela ukukunceda.
Umbono wale fama kukubonelela iindwendwe nge-ambience ezolileyo nezolileyo. Ixesha lokuhlangana kwakhona nendalo kamama. Esi sisizathu kanye esibangela ukuba sibuxabise ubumfihlo b…